जीवन शैली Archives | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - अनुहार हेरेर नै थाहा पाउनुस् मानिसको स्वभाव
काठमाडौं । नेपालमा युवा ज्योतिषीको नामले चर्चा बटुल्न सफल ज्योतिषी अर्जुन कुमार थापाले मानिसको अनुहार हेरेर (फेस रिडिङ) नै धेरै कुरा थाहा पाउन सकिने बताएका छन् । पछिल्लो समय मानिसहरुको भबिष्यबाणी प्रतिको बिश्वास बढ्दै गएको छ । ज्योतिषीशास्त्रलाई बैज्ञानिक संगठन नासाले समेत प्रमाणित गरिसकेको छ । नेपालमा मात्र नभएर बिश्वमै भविष्यबाणी तथा बास्तुशास्तको महत्व बढ्दै गएको छ । जीवनमा असफल, बैवाहिक जीवन, बैदेशिक रोजगार, ब्यापार ब्यवसाय, शैक्षिक अवस्था जस्ता कारण देखाएर सर्वसाधारणहरु ज्योतिषीकोमा जाने गरेका छन् । ज्यो. अर्जुन क्षेत्रीको स्थायी घर भोजपुर हो ।	थप पढ्नुहोस्
देशव्यापी बन्दै ‘पातञ्जल’ योग जागरण अभियान
भक्तपुर । 'पातञ्जल' योग समिति नेपाल भक्तपुरले देशव्यापी रुपमा योग जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । भक्तपुर जिल्लाबाट योग जागरण अभियान सुरु गरेको पातञ्जल योग समितिले सिटिईभिटिसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भएको हो । योग सम्वन्धी तालिम लिई योग शिक्षकको रुपमा कार्यरत योग शिक्षकले सिटिईभिटि मार्फत देशभर तालिम सञ्चालन गर्ने 'पातञ्जल' योगसमिति नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष सुर्दशन सुवेदीले बताएका छन । सिकेको ज्ञानलाई सिटिईभिटि सँग अब छिटै सम्बन्धन लिई व्यवस्थित रुपमा काम अगाडि बढाउने उनले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
जो सँधै अस्थिर र विस्थापित उसैको नाम स्थापित !
राजनीतिक अभियन्ता र स्वप्नद्रष्टा केशव स्थापितबारे केही रोचक–घोचक सन्दर्भ ¤नेपाल बहस टिप्पणी¤ भन्नुपर्ने ‘स्थपति’हो ‘स्थापित’होइन । जनजिब्रोमा जे सजिलो भयो त्यसै भनिदिएको हो ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । प्रेम आफैंमा एक यस्तो चिज हो, जसमा भावना र अनुभव 'फिलिङ' जोडिएको हुन्छ । प्रेम यस्तो अनुभव हो जसमा मानिसहरुलाई संशार पहिलेभन्दा सुन्दर लाग्न थाल्छ । प्रेममा परेका मानिसहरुलाई यस्तो लाग्छ मानौं उसको वरिपरि चारैतिर मात्र प्रेम छ । तर के तपाईलाई थाहा छ प्रेम कति प्रकारको हुन्छ ? या तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ कि मैले कस्तो प्रकारको प्रेम गरिरहेको छु ? पक्कै पनि हरेक मान्छेको मनमा आफूले गरिरहेको प्रेम कस्तो प्रकारको हो भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ । तर धेरैजसोले त्यसको जवाफ पाउँदैनन् ।	थप पढ्नुहोस्
ग्यास्ट्रिकका रोगीले चाडबाडमा कस्तो खानपान गर्ने ?
काठमाडौं । नेपाली हिन्दूहरूका दुई ठूला पर्व दसैं र तिहार नजिकिँदैछन् । सबैभन्दा रमाइलो पक्ष यी चाड र खानपान सँगसँगै जोडिएर आउने गर्छन्। दसैंमा आ–आफ्नो क्षमताअनुसार सबैले घरमै विशेष परिकार बनाएर आफन्तसँगै बसेर खाने चलन छ । यसरी पाक्ने खानाहरू प्रायः चिल्लो तथा मसलायुक्त नै हुने गरेको पाइन्छ। अरू परिकारमा पनि चिनीजन्य पदार्थको बढी प्रयोग हुन्छ, त्यो स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक होइन। रमाइलो गर्ने बहानामा धुम्रपान र मद्यपानको पनि बढी नै प्रयोग हुन्छ। यस्ता खानेकुराले कोलेस्ट्रोल तथा ग्यास्ट्रिक, ब्लडप्रेसर, डायबिटिज, दम, युरिक एसिड जस्ता समस्या बल्झाउँछ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । बडादशैंमा टीकासँगै शिर र कानमा लगाइने जमराको बहुउपयोग पछिल्लो समय नेपाली समाजमा निकै बढेर गएको छ ।मुलुकमा शहरीकरणसँगै आममानिसमा देखा परिरहेका गम्भीर प्रकृतिका अनेकौं रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमतायुक्त गुणकारी औषधिका रुपमा जमराको प्रचार भएसँगै यसको उपयोगिता बढ्दै गएको हो । नियमित रुपमा जमरा जुस सेवनबाट गम्भीर प्रकृतिका अर्बुद जस्ता रोगसँगै कोलेस्टेरोल, उच्च रक्तचाप, मधुमेह र ग्यास्ट्रिकका बिरामीलाई निकै फाइदा पुग्ने विश्वासका साथ यसको सेवन गर्नेको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
दूध चिया राम्रो कि कालो चिया ?
काठमाडौं । चिया कत्तिको पिउनुहुन्छ ? अलिअलि की अत्याधिक ? यदि तपाईँलाई चिया मनपर्छ भने स्वास्थ्यको लागि भन्दा पनि मज्जाको लागि पिउनुहुन्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। विश्वभरी लगभग २५ करोड मानिसहरूले चिया पिउने गर्छन्। तीमध्ये कतिपय यस्ता पनि हुन्छन्, जसलाई चिया नभई हुँदैन, जसलाई छिनछिनमै चिया वा कफी पिउनैपर्ने हुन्छ। अधिकांश नेपालीहरूलाई कालो चिया भन्दा पनि दूध चिया बढि मन पर्छ। तर वैज्ञानिकहरू भन्छन् दूधको एक थोपाले चियाको पुरै फाइदालाई शून्य बनाइदिन्छ। के हुन्छ चियामा ? अधिकांशले आनन्दको लागि, न्यानो गराउनको लागि चिया पिउने गर्छन् ।	थप पढ्नुहोस्
हेड सरको ‘सनही’
काठमाडौं । ‘प्रधानाध्यापक’ भन्नेवित्तिकै धेरैले अधिकांश समय विद्यालयको काममा खटिरहने शिक्षकको प्रमुख नाइके भनेर बुझ्ने गर्दछन् । प्रधानाध्यापकले विद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्षलाई राम्रो बनाउँदै शिक्षक न्यून हुने शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गराउने कामसमेत गरेका हुन्छन् तर कुश्माको एक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले भने अतिरिक्त श्रममा समेत आफूलाई अब्बल नाइकेका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । जिल्लाको एक माविका प्रअलाई सार्वजनिक बिदाको दिन प्रायः कुश्मा बजारमा हुने बिहे लगायत अन्य शुभकार्यमा गाला फुलाई–फुलाई सनही बजाइहेको देखिन्छ ।	थप पढ्नुहोस्
सानो कोठाको व्यवस्थापन यसरी गर्नुस
काठमाडौं । बेडरुम सानो छ भने कोठाको भित्तामा सेतो, क्रिम तथा खैरो रङ प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि झुक्किएर पनि कालो रङ प्रयोग गर्नु हुँदैन । भित्तामा सेतो, क्रिम वा खैरो रङ लगाउँदा राति शान्ति तथा दिउँसो ताजापन महसुस गर्न सकिन्छ । कोठाको लम्बाइ–चौडाइअनुसारको पलङ छनौट गर्नुपर्छ । भित्रपट्टि धेरै सामान राख्न सकिने पलङ खरिद गर्दा फाइदा हुन्छ । त्यसले कोठाका सामान छरपस्ट हुन दिँदैन । यदि सामान राख्ने स्थान छुट्टै भए फोल्ड गर्न मिल्ने पलङ प्रयोग गर्न सकिन्छ । सानो कोठालाई फरक देखाउन धेरै सामान राख्न सकिने दराज खरिद गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।	थप पढ्नुहोस्
यसरी तयार पार्नुहोस म्याङ्गो फ्रुटी
काठमाडौं । दुईवटा पाकेको र एउटा काँचो आँप लिने । उक्त आँपको बोक्रा ताछेर टुक्रा पार्ने । एक लिटर जुस बनाउन एक लिटर पानी लिने र त्यसमा हाल्न १ सय ग्राम चिनी तयार राख्ने । ताछेर कोया निकालिएको आँपको टुक्रालाई प्रेसर कुकरमा हाली एक चिया गिलास पानी मिसाउने अनि ४–५ सिट्ठी लागुन्जेल पकाउने । १ सय ग्राम चिनी एक चिया गिलास पानीमा हालेर अर्को भाँडोमा पकाउने । चिनी पानीमा राम्रोसँग नघुलुन्जेल पकाउनुपर्छ । धेरै नपकाई त्यसलाई सेलाउन दिने । आँप पकाएको प्रेसर कुकरलाई पनि आफैं सेलाउन दिने । सेलाएपछि पकाइएको आँपलाई ब्लेन्डिङ जारमा हालेर ब्लेन्ड गर्ने ।	थप पढ्नुहोस्